HUNDEEFFAMA, GURMAA’INSA, ERGAMAA FI AANGOO MANNEEN MURTII OROMIYAA | Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
HUNDEEFFAMA, GURMAA’INSA, ERGAMAA FI AANGOO MANNEEN MURTII OROMIYAA
A. HUNDEEFFAMAA FI GURMAA’INSA
Manneen Murtii Oromiyaa sirna federaalizimii kufaatii sirna Dargii booda hojiirra oole hordofuun bara 1985 keessa kan hundaa’anii dha. Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa keessatti Manneen Murtii Naannichaa Mana Murtii Waliigalaa, Mana Murtii Ol’aanaa fi Mana Murtii Aanaa jedhamuun sadarkaa sadiitti akka gurmaa’an taasifameera.
Yeroo ammaa kanattis Manneen Murtii Aanaalee 304, Manneen Murtii Ol’aanaa 21 fi Mana Murtii Waliigalaa 1 (dhaddachaalee dhaabbii 3 dabalatee) hundaa’anii tajaajila abbaa seerummaa kennaa kan jiranii dha.
Akkaataa Labsii Lakk. 216/2011 keewwata 23 jalatti tumameen Manneen Murtii Oromiyaa ergama waloo tajaajila abbaa seerummaa dhaqqabamaa, si’ataa fi bu’a qabeessa ta’e, seera qofa irratti hundaa’uudhaan, haala loogii fi gartummaan ala ta’een kennuuf dirqama ni qabaatu. Hojii isaaniis bilisummaa guutuu fi itti gaafatamummaa ol’aanaadhaan ni raawwatu. Tumaan waliigalaa kun akkuma eegametti ta’ee:
• Manni Murtii Waliigalaa tajaajilli abbaa seerummaa Naannicha keessatti walfakkaatummaa fi tilmaamamummaa akka qabaatuuf ni hojjata;
• Manni Murtii Ol’aanaa bu’uuraan Mana Murtii ol’iyyannoo ta’ee, hir’ina yookiin dogongora seeraa yookiin ijoo dubbii, walumatti hir’ina murtiin Mana Murtii jalaa qabu ol’iyyannoodhaan dhagahee sirreessuuf ni hojjata;
• Manni Murtii Aanaa Mana Murtii sadarkaa jalqabaa ta’ee, dhimmoota abbaan seerummaa itti gaafatame ofitti fuudhee sadarkaa jalqabaatiin ilaalee murtii kennuuf ni hojjata.
C. AANGOO ABBAA SEERUMMAA
Aangoon Abbaa Seerummaa Manneen Murtii Oromiyaa kutaa sadaffaa labsii lakk. 216/2011 keessatti bal’inaan tumameera. Haaluma kanaan Manneen Murtii Oromiyaa akka qajeeltootti dhimmoota armaan gadii irratti aangoo abbaa seerummaa ni qabaatu.
Dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin Mootummaa Federaalaaf adda bahee hin kennamne kamiyyuu irratti;
Dhimmoota heeraa fi seerota Naannichaa bu’uureffatanii uumaman irratti;
Dhimmoota, namoota fi qabeenya daangaa Naannichaa keessatti uumaman yookiin argaman irratti;
Akkaataa Seera Deemsa Falmiitiin yookiin seera birootiin, dhimmoota Manneen Murtii Naannootiif kennamanii fi daangaa Naannichaa keessatti raawwataman irratti;
Bu’uura Heera Federaalaa Keewwata 78 (2) tiin dhimmoota Federaalaa irratti aangoo abbaa seerummaa ni qabaatu.
Gama kaaniin Manneen Murtii Oromiyaa dhimmoota Magaala Finfinnee keessatti uumaman kan armaan gadii irratti aangoo abbaa seerummaa kan qaban ta’uun tumameera.
Dhimma yakkaa abbootii aangoo fi hojjattoota Mootummaa Naannichaa aangoo fi hojii isaaniitiin walqabatee raawwatame yookiin irratti raawwatame;
Dhimma qabeenya Mootummaa Naannichaa irratti yookiin mooraa keessatti, yookiin dallaa mana hojii Mootummaa Naannichaa irratti raawwatame;
Dhimma hariiroo hawaasaa hojii yookiin sochii hojii mana hojii yookiin abbaa aangoo yookiin hojjetaa Mootummaa Naannichaa waliin walqabatee uumame;
Dhimma yakkaa daangaa Naannichaa keessatti eegalame yookiin raawwatamee Magaala Finfinnee keessatti xumurame yookiin dahate.
Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota kanneen ofitti fuudhee ilaaluun murtii kan kennuu Mana Murtii sadarkaa barbaachisu yookin dhaddacha barbaachisu Magaala Finfinnee keessatti hundeessuu akka danda’u labsichaan tumameera.
Kana malees labsichi aangoo hundee dubbii Manneen Murtii sadarkaan jiranii akka itti aanutti ifatti lafa kaa’era.
(i) Aangoo Abbaa Seerummaa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
Manni Murtii WaliigalaaNaannicha keessatti dhimmoota naannoo irratti aangoo abbaa seerummaa isa ol’aanaa fi isa dhumaa ni qabata. Kun akkuma jirutti ta’ee Manni Murtichaa dhimmoota armaan gadii irratti aangoo abbaa seerummaa ni qabaata:
Dhimma naannoo irratti murtii Manni Murtii Ol’aanaa kenne irraatti komii dhiyaate ol’iyyannoon dhagahee murtii dhumaa kennuuf;
Bu’uura heera mootummaa federaalaa keewwata 80 (2)tiin, dhimmoota federaalaa irratti aangoo sadarkaa jalqabaa Mana Murtii Ol’aanaa Federaalaa;
Bu’uura heera federaalaa keewwata 80 (4) tiin, dhimma federaalaa Manni Murtii Ol’aanaa aangoo sadarkaa jalqabaatiin ilaalee murtii kenne irratti aangoo ol’iyyannoon dhimmicha dhagahee murtii kennuu;
Akkaataa Seera Deemsa Falmiitiin gaaffii dhimmi tokko Mana Murtii Ol’aanaa tokko irraa gara Mana Murtii Ol’aanaa biraatti yookiin gara Mana Murtii Waliigalaatti akka darbee ilaalamuuf dhiyaatu ilaalee murteessuu;
Gaaffii dhimmi tokko aangoo Mana Murtii isa kamii ta’uu qaba jedhu yoo dhiyaatuuf ilaalee murtii kennuu;
Dhimma naannoo ilaalchisee dhimma murtii dhumaa argate irratti gaaffiin dogoggorri bu’uura seeraa raawwatameera jedhu yoo dhiyaatu ofitti fuudhee Dhaddacha Ijibbaataatiin ilaalee murteessuu dha.
(ii) Aangoo Abbaa Seerummaa Mana Murtii Ol’aanaa
Manni Murtii Ol’aanaa dhimmoota daangaa bulchiinsa godinichaa keessatti uumamaniin walqabatee aangoo abbaa seerummaa armaan gadii ni qabaata:
Dhimmoota hariiroo hawaasaa fi yakkaa Manneen Murtii Aanaa godinichaa sadarkaa jalqabaatiin ilaalanii murteessan ol’iyyannoodhaan dhagahee murteessuu;
Dhimma yakkaa adabbii hidhaa baaxiin isaa waggaa 15 oliin adabsiisuu danda’u irratti;
Dhimma hariiroo hawaasaa qabeenya socho’u tilmaamni mallaqaa isaa qarshii milliyoona 1 (tokko) ol ta’e, kan qabeenya hin sochoone tilmaamni mallaqaa isaa qarshii miliyoona 3 (sadii) ol ta’e ilaalee murteessuu;
Bu’uura heera mootummaa federaalaa keewwata 80 (4) tiin, dhimma Federaalaa ilaalchisee aangoo sadarkaa jalqabaa Mana Murtii Federaalaa Sadarkaa Jalqabaa;
Akkaataa Seerri Deemsa Falmii ajajuun, gaaffii dhimmi tokko Mana Murtii Aanaa tokko irraa gara Mana Murtii Aanaa biraatti yookiin gara Mana Murtii Ol’aanaatti darbee akka ilaalamu dhiyaatu ilaalee murteessuu;
Seera birootiin Mana Murtii sadarkaa birootiif yoo kenname malee Murtii qaamoonni aangoo seeraan kennameef irratti hundaa’udhaan murteessan irratti ol’iyyannoo dhiyaatuuf ilaalee murteessuuf aangoo ni qabaata. Murtiin inni dhimma akkasii irratti kennus isa dhumaa fi ol’iyyannoo kan hin qabne ta’a.
(iii) Aangoo Abbaa Seerummaa Mana Murtii Aanaa
Manni Murtii Aanaa dhimmoota daangaa bulchiinsa aanichaa keessatti uumaman irratti aangoo Abbaa Seerummaa armaan gadii ni qabaata:
Dhimma hariiroo hawaasaa qabeenyaa socho’u tilmaamni mallaqaa isaa qarshii milliyoona 1 (tokko) hin caalle, qabeenya hin sochoone tilmaamni mallaqaa isaa qarshii miliyoona 3 (sadii) hin caalle ilaalee murteessuu;
Iyyata qaama bilisa baasuuf dhiyaatu, yookiin iyyata dhimma dhaaltummaa akkasumas dhimmoota biroo maallaqaan shallagamuu hin dandeenye ilaalchisee dhiyaatu irratti aangoo abbaa seerummaa sadarkaa jalqabaa;
Dhimma yakkaa adabbii hidhaa baaxiin isaa waggaa 15 hin caalleen adabsiisan irratti aangoo sadarkaa jalqabaa;
Dhimma seerota Caffeedhaan tumaman keessatti adabbii yakkaa hordofsiisan irratti aangoo Abbaa Seerummaa sadarkaa jalqabaa;
Manni murtii aanaa dhimma biraa ifatti aangoo Mana Murtii Ol’aanaa jalatti hin kufne kamiyyuu irratti aangoo sadarkaa jalqabaa ni qabaata.
D. SIRNA IJIBBAATAA
Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota Naannoo murtii dhumaa argatan irratti dogongorri bu’uura seeraa raawwatameera jedhamee iyyata dhiyaatu ofitti fuudhee murteessuuf aangoo ni qabaata. Dhimmi tokko dhimmi murtii dhumaa argate tokko Dhaddacha Ijibbaataatiin kan ilaalamu murtichi dogoggora bu’uuraa seeraa qaba jedhamee yoo amaname qofaa dha.
Murtiin dhumaa tokko ‘dogoggora bu’uuraa seeraa qaba kan jedhamu murtichi:
Dogoggora hiikaa seeraa yookiin duudhaa seeraa yoo qabaate, yookiin seera ifatti tumame cabsee yoo argame fi dhiibbaa hin malle mirga namaa yookiin sirna seeraa irratti kan hordofsiise yoo ta’e; yookiin
Seeraan ala bilisummaa fi mirga namoomaa bu’uuraa kan dhabsiise yookiin kan dhiphise yoo ta’e; yookiin
Gar-malee haqa kan jallise yookiin dhabamsiise yoo ta’ee dha.
Gama biraatiin dhimmootni armaan gadii Dhaddacha Ijibbaataatti dhiyaachuu hin danda’an:
Dhimmoota bu’uura Heeraa Federaalaa fi seera birootiin addatti Manneen Murtii Federaalaatiif kennaman; yookiin
Dhimmoota Naannoo murtii dhumaa hin arganne; yookiin
Murtii dhumaa falmii baasii fi kisaaraa yookiin yakka dambii darbuun walqabate;
Murtii dogoggora firii dubbii kamiyyuu, yookiin dogoggora yookiin hir’ina ragaa fuudhuu yookiin madaaluu irratti raawwatame.